Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Champagne maka Onye ọ bụla bụ ihe mkpuchi COVID gị
Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Onye guzobere izu New York Champagne, Blaine Ashley, gbara Dr. Elinor Garely ajụjụ ọnụ, ebe mkparịta ụka ahụ lekwasịrị anya ihe kpatara Champagne ji bụrụ ihe ụwa chọrọ ugbu a.
Openingmepe karama nke Champagne nwere ike inyere anyị aka ịgafe okporo ụzọ siri ike, nke na-asọ oyi, nke na-adịghị mma, nke a na-akpọ COVID-19?
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-achọpụta na ọ na-atọ ụtọ n'ime afọ na tebụl ezinụlọ yana nri abalị nke ọkụkọ eghe na french fries.
Ọgwụgwụ nke 2020 hụrụ Washington, DC, ndị na-ere ahịa na-ere ọtụtụ champeenu mgbe mmeri Biden / Harris karịa emume Afọ Ọhụrụ abụọ gara aga jikọtara.
Bido na mbido 2020, ụwa ka anyị siri mara ya, bie ya, nwee ahụmihe kwa oge - ọbụlagodi hụrụ ya n'anya… agbanweela. Uzo a esiteghi n'aka ndi nwere ejiji, ndi okike, ndi egwu, ndi osi nri, ma obu ndi na-ese ulo. Mgbanwe a ka ndị bụbu ndị isi, ndị ọrụ gọọmentị ụwa, na ndị isi ụlọ ọrụ mere, bụ ndị, karịa atụmanya, enwee ike ileghara sayensị anya na nkwenye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Dika ndi ochichi chi na chi di iche iche, ndi ochichi nke ndi ochichi, na ndi ndu ndi ozo dupuru ha, akuko n'ile anya. Ọ bụ ezie na ọdịnihu dị nso na nke na-adị mkpụmkpụ ga-adị ka nke na-adịghịzi, nghọta ga-adị… ma ọ bụrụ na anyị ga-ebi ogologo oge!
Yabụ - kedu ka anyị ga-esi gafere n'okporo ụzọ siri ike, na-akpụ akpụ, na-akpụ akpụ, na-enweghị ụzọ dị n'ihu? Anyị na-emeghe karama nke Champagne ma na-ele anya na egosipụta na nkwenkwe na ndị ọzọ emeela ya site na agha na ọrịa na-efe efe, nkwesi olu ike na ịkpọasị, anyị siri ike ma nwee ume zuru oke iji mee ya site na COVID-19.
Azịza ya bụ Champagne
Tupu 2020, oriri Champagne abawanyela na mbupụ na United States site na ihe karịrị karama 5 nde n'etiti 2015 na 2019 (Comite Champagne) na ahịa ahịa nke Champagne amụbawo site na 3.51 pasent kemgbe 2016 (Drizly).
N’ụzọ dị mwute, ndị na-akọ mkpụrụ vaịn na ndị na-emepụta mmanya na Champagne, France, yana ụwa ndị ọzọ, emetụtala ọrịa a n’ụzọ na-adịghị mma. Malite na Eprel 2020, ahịa Champagne dara site na 1/3, ya na ihe ruru $ 2 ijeri na ego ha nwetara na 100 nde karama nke Champagne - hapụrụ na ngwongwo… na-ereghị.
Nke a abụghị nke mbụ ndị ahịa na-agbakụta Champagne azụ. Na 2009, e nwere ịrị elu pasent 28 na mbupụ, na n'oge Oké Ndakpọ Akụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ gara aga, Champagne abụghị ihe ọ ofụ ofụ mmanya. N'aka ozo, odida nke 2020 aburula ihe ojoo ma obughi ihe iju anya.
Nsogbu Na-eche Champagne
Ire ahia kwesiri
Nsogbu a abughi n'ihi ngwaahịa kama kama site na ahia ya. Emere Champagne na otu ndi mmadu nwere obi uto, na-eme ememe mmalite nke ndu (omumu ohuru), oru ohuru (ma obu nkwalite), agbamakwụkwọ ma obu ememe ncheta, inweta mmeri nke loto, ma obu mechie marathon. Omume ndị a niile dị na mbụ ugbu a na-enye ọnọdụ zuru oke maka ịgbasa na ngwa ngwa mgbasa nke COVID-19 ma, ya mere, edebere ya na ndepụta NO GO. Na Southern California, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke ahịa Champagne jikọtara ya na ememe. Mgbe oria ojoo a rutere, ahia rida na pacenti iri ato. N'oge mkpọchi Europe, ahịa champeenu belatara ihe dị ka pasent 30.
Champagne bụ ihe ọ ofụ ofụ nke ndị njem na-anọdụ ọdụ na ọdụ ụgbọ elu mbụ na nke ụgbọ elu. COVID-19 ewepụla ọmarịcha nri, ọtụtụ ihe oriri na ọrụ mmadụ na-ekpo ọkụ nke bụbu ihe eji amata ndị bu ụgbọ elu dịka Singapore Airlines Ltd. na Cathy Pacific Airways Ltd. Uche ụgbọ elu ugbu a bụ maka nchekwa na ịdị ọcha, na-enye mkpuchi mkpuchi na ndị na-ehicha aka ma ọ bụghị Champagne.
Afọ nke atọ nke Okpomoku Uwa
Mpaghara Champagne enwetawo oge 3 na-ekpo ọkụ. Okpomoku nke uwa agbanwewo ihu igwe, meputa usoro iheomume ohuru na ihe ima aka nye ndi okacha amara ulo oru manya. Site na Jenụwarị ruo June, okpomọkụ karịrị nkezi edekọ edere. Early okooko na greepu apa ọkụ anyanwụ n'oge August gbanwere physiology nke mkpụrụ vaịn. A tụtụtara mkpụrụ vaịn na mbido 2020 (August 17) na mpaghara Aube.
O nwere ike ịbụ n'oge na-adịghị anya iji chọpụta ma 2020 ọ ga-abụ vintejị, mana ndị ọkachamara kpebiri na enwere nnukwu ohere na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya n'ihi na enwere nguzozi magburu onwe ya n'etiti ntozu okè, acidity na shuga.
Ntụle Ndị Na-efe Ọrịa
Ndị na-emepụta mmanya na Champagne na-emebu ihe gbasara ikpo ọkụ nke ihu igwe, ala, na ahụhụ na-egbutu osisi vaịn, akwụkwọ, na mkpụrụ vaịn; n’agbanyeghi, oria ojoo ojoo diri ndi oru oru na ndi iko mmanya aburula ihe ima aka karia nka ha. Nsogbu ahụike chọrọ nyocha ọhụrụ na ngwaahịa ha, mmepụta, nkesa, na oriri ha, na-achọ ka a hazigharị usoro eji eme ihe.
Iwu Kọmitii Champagne
Ọ bụ Kọmitii Champagne, na-anọchite anya ndị ọbịa 16,000 na France na Champagne mpaghara na-eme iwu maka ndị na-emepụta mmanya. Nzọụkwụ mbụ bụ ichebe ndị ọrụ wee zụọ ha mgbe ahụ n'ịgbaso usoro ịdị ọcha. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmachi ókè mkpụrụ vaịn a ga-aghọrọ na nzube nke ịkwado ọnụ ahịa. Akụkụ dị mwute nke akụkọ ahụ bụ na e bibiri ma ọ bụ ree nnukwu mkpụrụ vaịn na ọnụahịa dị ala. Kọmitii ahụ kpebiri na a ga-ahapụ ndị na-agụ akwụkwọ mmanya ka ha chịkọta kilogram 8000 nke mkpụrụ vaịn kwa hectare maka oge ahụ, ma ọ bụ ihe kwekọrọ na karama nde 230 maka mpaghara ahụ dum nke bụ pasent 21 na-erughị ego enyere na 2019.
Enyemaka site na Gọọmentị France
Champlọ Champagne nwere ngwa ahịa na akụnụba ndị ọzọ; otu osila dị, mmanya na ala abụghị mmiri mmiri, ya mere, enweghị ike ịkwụ ndị ji ụgwọ ụgwọ. Ndị na-a winụ mmanya na Champagne enweela ike ịnweta pret garanti par l'Etat (PGE) gọọmentị nwere ọmụrụ nwa na-enweghị ego maka ọnwa 3 nke ntụgharị 2019 na usoro ịkwụ ụgwọ dị mfe ruo 2022.
Na mbido ọrịa a, ndị ji ụgwọ malitere ịkwụsị ịkwụ ụgwọ mgbe ahịa dara. PGE nyere ikike ịkwụ ụgwọ ụgwọ n'oge, yana ụgwọ ndị ọrụ. Gọọmentị kwụkwara ndị ọrụ akwụgo ụgwọ ọrụ ha site na ngalaba ngalaba chomage (ndị ọrụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na-akwụ ndị ọrụ ha ụgwọ). Site na usoro a, onye ọrụ ahụ na-aga n'ihu ịnata pasent 85 nke ụgwọ ọnwa ya n'agbanyeghị na ha anaghị arụ ọrụ. Enyemaka ọzọ nke gọọmentị - fonds de solidarite - na-enyere ụlọ ọrụ aka ịnọ na mmiri. N'ọnọdụ ụfọdụ, gọọmentị na-ehichapụ ebubo na-elekọta mmadụ na / ma ọ bụ ụtụ isi maka oge a kapịrị ọnụ ntụgharị agbanweela nke ukwuu. Mmemme ndị a egbochila nsogbu nsogbu ma nwee ike igbochi mmiri mmiri ma ọ bụ nkwado.
Ndị isi egwuregwu
Ọ ga-abụ ihe na-erughị nka ịbanye n'ụlọ ahịa mmanya ma ọ bụ mkparịta ụka na onye na-elekọta ma rịọ maka otu iko Champagne! Dịka ngwaahịa ndị ọzọ dị oke ọnụ, akara ahụ dị mkpa dịka ngwaahịa a. Ndị isi akara nke Champagne na-amalite Moet, na Moet Hennessy akara na elu nke ndepụta Champagne dị ka nkewa nke LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) nke nwere ụdị akara ngosi Champagne 6 gụnyere Veuve Clicquot, Moet & Chandon, na Dom Perigon. Moet & Chandon bụ ụlọ nnukwu Champagne nke na-ere karama 64.7 na 2019 na ọnụahịa na-amalite na $ 42 kwa karama. All Moet Hennessy ụdị na-enye iyi ego kwa afọ maka LVMH nke ijeri euro 2.21, were ndị mmadụ 2485 n'ọrụ.
Vranken-Pommery Monopole bụ nke abụọ kachasị na Champagne na ọ nwere akara Champagne ise gụnyere Vranken, Demoiselle, Charles Lafitte 183, Pommery, na Heidsieck & Co. na-eweta ego nke 218.8 nde euro. Companylọ ọrụ ahụ na-ejikwa hectare 2600 nke ala (nke kasị ukwuu na Europe) gbasaa na ubi vaịn 4 na Champagne, Provence, Camargue, na Douro.
Nicolọ Nicolas Feuillate Champagne na-ewepụta nde euro 211.9 na-esote Lauren Perrier na 206.2 nde euro. Piper Heidsieck (Copagnie Champenoise PH-CS) na - enweta ego kwa afọ nke nde euro 109.2. Oldestlọ Champagne kasị ochie, Gosset, na-emepụta ego kwa afọ nke nde euro 23.7 (BoldData.com).
Dabere na Michelle DeFeo, onye isi oche nke Laurent-Perrier US, a na-azụta ọtụtụ Champagne maka ememme ezumike; n'agbanyeghị, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-achọpụta na ọ na-atọ ụtọ n'ime afọ. Ebe ọ bụ na ụzọ abụọ nke Champagne dị mma nke ukwuu na nri, ọ bidola ịpụta na tebụl ezinụlọ yana nri abalị nke ọkụkọ eghere eghe na eghere eghe dịka Philippe Andre, onye nnọchi anya US maka Champagne Charles Heidsieck. Moet Imperial Brut bụ ezigbo enyi na sushi.
Ọrịre ndị Champagne hụrụ na mba America na njedebe nke afọ 2020 na-eso ntuli aka onye isi ala. Ndị na-ere ahịa na Washington, DC, rere ọtụtụ champeenu mgbe emume ahụ karịa emume Afọ Ọhụrụ abụọ gara aga jikọtara dị ka ndị ntuli aka mere ememme mmeri Biden / Harris. Ọbụna na Brooklyn, NY, e nwere Champagne na-azụ ahịa, otu onye na-ere mmanya mmanya nọkwa na mpaghara ahụ kpebiri na ọ na-ere 600 pasent karịa mmanya na-egbukepụ egbukepụ mgbe emechara ntuli aka karịa izu ndị gara aga wee kwụsị ire ngwaahịa ya niile.
Ndị nwe ụlọ ahịa mmanya na-ere ahịa na-agụzigharị ndị ọrụ dabere na nyocha Champagne na-achọpụta na isi ihe kpatara ịre ahịa Champagne na isi nke ịzụta bụ nkwanye nke ndị na-ere ahịa; ya mere, ọzụzụ ndị ọrụ ire ga-elekwasị anya na nkwanye maka karama ndị dị elu nke Champagne.
A na - etinye Champagne iji nwetaghachi ahịa ma ree karama 300 nde na njedebe nke 2021 ma ọ bụ 2022 n'oge kachasị ọhụrụ.
Ihe Worldwa Chọrọ Ugbu A
Blaine Ashley, Onye guzobere, New York Champagne Week; Fizz bụ Femal
pịa ka ịge ntị na pọdkastị
Malite na 2013, Blaine Ashley abụwo akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ Champagne ma ọ bụ ya onwe ya na-ahụ maka ịkọwapụta ngwaahịa ahụ site na ihe okike, ihe ngosi dị elu nke na-eme ka mmata nke ahia, mgbasa ozi, na ahịa ndị ahịa na mpaghara mmanya a dị mkpa. Na 2018, Ashley malitere Fizz bụ nwanyị, usoro mmemme na mmemme usọrọ inyom na-eduga na-egbuke egbuke mmanya ụlọ ọrụ. N'ịghọta mkpa Ashley nwere maka ụlọ ọrụ mmanya na-egbuke egbuke, Wine Enthusiast magazine kpọrọ ya The Champagne Queen wee gụnye ya dị ka 40 n'okpuru 40 Tastemaker (2016).
Amuru na Honolulu, Hawaii, Ashley bidoro ahia ahia ya na ejiji ohuru na akwukwo ndi bi na oge a. Na 2010, ọ kwagara New York wee bido kọlụm kwa ọnwa nke ya, Sipped 'n Scene, nke e bipụtara na Tasting Panel na Ebe Njem.
Na February 19, 2021, Ashley gbara Dr. Elinor Garely ajụjụ ọnụ, na WorldTourismNetwork ebe mkparịta ụka a lekwasịrị anya n'ihe mere Champagne ji bụrụ ihe ụwa chọrọ ugbu a.